Translator Profile: Thang Cin Lian (lianpi) | TM-Town
bible, personal documents, biomedical sciences
Experience in translation from online resources.
Sample Translation Bible
Bible Sample Translation
In Christian communities, Bible study is the study of the Bible by ordinary people asapersonal religious or spiritual practice. ခရစ်ယာန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ကျမ်းစာလေ့လာမှုဟူသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့် အဖြစ် သာမန်လူများက သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
Some denominations may call this devotion or devotional acts; however in other denominations devotion has other meanings. တချို့သော ဂိုဏ်းဂဏများက ဤကဲ့သို့ သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်းအမှုကို ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှု သို့မဟုတ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ အဖြစ် ခံယူကြသော်လည်း အခြားသော ဂိုဏ်းဂဏများမှာတော့ ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုမှာ အခြားအဓိပ္ပါယ်များရှိနေပြန်သည်။
Bible study in this sense is distinct from biblical studies, which isaformal academic discipline. ကျမ်းစာကို ဤသဘောမျိုးဖြင့် လေ့လာမှုသည် သမားရိုးကျပညာရေးစနစ်က သင်ကြားပို့ချမှုများမှ ကွဲပြားပါသည်။
In Evangelical Protestantism, the time set aside to engage in personal Bible study and prayer is sometimes informally calledaQuiet Time. ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာ ပရိုတက်စတင့်အယူဝါဒမှာတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျမ်းစာလေ့လာမှုနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာလေ့လာနိုင်ဖို့ နှင့် ဆုတောင်းခြင်းမှာ ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ ဘေးဖယ်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် "တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ချိန်" လို့ ရိုးရိုးလေး ခေါ်ကြပါသည်။
In other traditions personal Bible study is referred to as "devotions". အခြားထုံးတမ်းစဉ်လာမှာတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကျမ်းစာလေ့လာမှုကို ဘုရားတရားဆင်ခြင်ခြင်း. ဝတ်ပြုခြင်း အဖြစ်ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
Catholic devotions and Anglican devotions both employ the Lectio Divina method of Bible reading. ကက်သလစ် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း နှင့်အင်္ဂလီကန် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း တို့သည် Lectio Divina ၏ ကျမ်းစာဖတ်နည်းကို အသုံးပြုကြသည်။
Christians of all denominations may use Study Bibles and Bible Reading notes to assist them in their personal Bible studies. ဂိုဏ်းဂဏ ပေါင်းစုံကခရစ်ယာန်တွေဟာ ကျမ်းစာလေ့လာနည်းနှင့် ကျမ်းစာဖတ်နည်းဆိုင်ရာမှတ်စုများကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာလေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ အသုံးပြုကြသည်။
However, the use of such aids is discouraged in many churches, which advocate the simple reading of Bible passages. သို့သော်လည်း ရိုးရှင်းသည့် ကျမ်းပိုဒ်များဖတ်ခြင်းကိုသာ ထောက်ခဲအားပေးသည့် အသင်းတော်များမှာ ထိုကဲ့သို့အကူအညီ အထောက်အပံ့များ အသုံးပြုခြင်းကို အားပေးမှုမရှိပဲ တားမြစ်ထားကြသည်။
In some cases, the practice of reading through the entire Bible inayear is followed, this usually requires readings each day from both the Old and New Testament. အချို့ကိစ္စများတွင် တစ်နှစ်တာအတွင်း ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကို ဖတ်ရှုမှု အလေ့အကျင့် နောက်ကိုလိုက် ကြသည်။ များသောအားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း နှစ်ကျမ်းလုံးကို နေ့စဉ်ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်စေပါသည်။
This practice, however, has been widely criticised on the basis that the understanding gained of each specific passage is too vague. သို့သော် တိကျသည့်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်စီတိုင်းမှ ရရှိခဲ့သည့်နားလည်မှုသည် အလွန်ပင် မရေရာမသဲကွဲဟုဆိုသည့် အခြေခံ အကြာင်းတရားပေါ်တည်၍ ဤလေ့အကျင့်ကို အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ကြသည်။
The association of Bible study and prayer is an important one. ကျမ်းစာလေ့လာမှုနှင့် ဆုတောင်းဝတ်ပြုမှုတို့၏ ပေါင်းဖက်ခြင်းသည် အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပါသည်။
Christians do not merely study the Bible as an academic discipline, but with the desire to know God better. ခရစ်ယာန်တွေဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို ပညာရေးအနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူယုံမျှမက ထာဝရဘုရားသခင်ကို ပိုမိုသိချင်သည့် ဆန္ဒဖြင့် ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြသည်။
Therefore, they frequently pray that God will give them understanding of the passage being studied. ထို့ကြောင့် သူတို့လေ့လာသင်ယူနေသည့် ကျမ်းပိုဒ်များကို နားလည်မှုများ ပေးတော်မူမည့်အကြောင်း ဆုတောင်းသနားခံလေ့ရှိကြသည်။
They also consider it necessary to consider what they read with an attitude of respect, rather than the critical attitude which is frequently followed in formal study. သူတို့ ကျမ်းစာဖတ်သည့်အခါ ကျမ်းစာသင်အံမှုကို စနစ်တကျ သင်ယူလေ့လာတတ်သည့်စိတ်သဘောထားဖြင့်ဖတ်ရှုမည့်အစား လေးစားကြည်ညိုသည့်စိတ်သဘောထား သက်သက်ဖြင့်ဖတ်ရန် စဉ်းစားကြသည်။
To them, the Bible is not justasacred book, but is the very Word of God, that is,amessage from God which has direct relevance to their daily lives. ထိုသို့သောလူများအဖို့ သမ္မာကျမ်းစာသည် သူတို့ အလေးအမြတ်ထားရာ ကျမ်းစာအုပ်သက်သက်မျှမ ဟုတ်ပါပဲ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ့သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအသက်သာ နှင့်တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် ဘုရားသခင်ထံမှ လာသော သတင်းစကားတည်းဟူသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်ပေသည်။
Message Thang Cin Lian